9 Sababood oo Sabab u ah Maalgelinta Software-ka Gudbinta Suuq geynta Waa Maalgashiga Ugu Wanaagsan ee Kobcinta Ganacsigaaga | Martech Zone
Marka laga hadlayo koritaanka ganacsiga, adeegsiga tikniyoolajiyaddu waa lama huraan!
Laga soo bilaabo wax yar hooyo iyo pop dukaamada shirkadaha waaweyn, waa wax aan la dafiri karin in maalgashiga tikniyoolajiyaddu ay bixiso lacag badan iyo in milkiileyaal badan oo ganacsi aysan dareensanayn miisaanka maalgashi ee teknolojiyaddu wadato. Laakiin ku sii jiritaanka kor u qaadista tikniyoolajiyadda iyo softiweerka ma aha hawl fudud. Fursado badan, xulashoo badan ...
Maalgelinta barnaamijka suuq geynta ee saxda ah ee ganacsigaaga waa mid muhiim ah waana inay noqotaa qayb muhiim ka ah istiraatiijiyad kasta oo koritaan ah. Laakiin maalgalinta softiweerka suuq geynta suuq geynta ah kuma saabsana “dhaqso taajir ku noqo.” Waa maalgashi qiimo badan.
Lacag dhigida dhanka softiweerka suuq geynta iyo tikniyoolajiyaddu waxay ku saabsantahay kobcinta ganacsigaaga iyo kordhinta macaashka muddada dheer. Iyo, inta taasi qiimo ku fadhido, waxay u badan tahay inay ka hooseyso intaad moodeysay.
Adiga, iyo meheraddaadu ma awoodi kartaa inaadan bixin?
Waa maxay Maalgalin Software Gudbinta Suuq Geyn?
Milkiile kasta oo ganacsi wuxuu leeyahay xulashada meesha iyo sida loo maalgashan karo lacagtooda. Tani waxay noqon kartaa wax kasta oo ka socda iibsashada alaabada iyo shaqaaleynta shaqaalaha, iibsashada qalabka iyo alaabada aad u isticmaashid inaad ku socodsiiso ganacsigaaga. Laakiin go’aanka meesha iyo goorta maalgashiga noqon karo mid khiyaano badan.
Sannad gudihiis, shirkadaha sameeya maalgashiga suuq geynta suuq geynta caqliga ayaa arki kara koboc deg deg ah iyo soohdin faa'iido fiican. Waxaa jira alaabooyin badan oo software suuq geyn gudbin ah kuwaas oo ka dhigi kara noloshaada iyo nolosha shaqaalahaaga mid fudud.
Shaqaale faraxsan = koror badan!
Iyada oo la adeegsanayo softiweerka suuq geynta, maahan wax badan oo ku saabsan inta aad kharash gareyso; waa sidaad ubixiso. Ma waxaad dooneysaa wax la jaan qaadaya himilooyinka shirkaddaada oo ka dhigaya shaqadaada mid fudud oo wanaagsan? Maaha inay ahaato maalgashi muhiim ah. Dhammaantood waxay ku yimaadaan samaynta doorashada ugu fiican.
“Maalgashiga” softiweerka suuq geynta gudbinta kaliya macnaheedu waa helitaanka rukhsad siinta softiweerka suuq geynta ee lagama maarmaanka u ah socodsiinta maalinlaha ah, suuqgeynta ama howlaha kale ee ganacsiga. Caadi ahaan, milkiilayaasha meheraddu waxay ku bilaabaan iyagoo iibsanaya softiweerka suuq geynta gudbinta ee ay ugu baahan yihiin inay ku socodsiiyaan ganacsiga iyagoo sugaya inay iibsadaan liisamada "fiican in la haysto" softiweerka marxaladda dambe.
Iyadoo liisamada ay ku kacayaan meel kasta oo laga bilaabo dhowr senti illaa kumanaan doolar; qaarna waxay leeyihiin kharash hal mar ah, qaarna waxay la kulmayaan lacag bille ah soo noqnoqoshada, waligeed sidaa ugama ay ahayn muhiim in la miisaamo dhammaan xulashooyinka ka hor inta aan la maalgalin softwares suuqyada gudbinta.
Sidee Maalgashiga Barnaamijka Soo-Gudbinta Suuq-geynta U Caawiyaa Kobaca Ganacsiga?
Haddii aad leedahay shirkad bilow ah ama aad maamule guud ka tahay hawlgal isku dhafan, ma aha in qof kastaa uu aamminsan yahay buunbuuninta ah in maalgelinta barnaamijyada suuqgeynta suuqgeynta ay dhiirrigelinayso koritaanka ganacsiga iyo in la oran karo waa maalgashiga ugu amniga badan ee ganacsi kasta.
Waa kuwan sagaal sababood sida uu qabo Kirsty McAdam; Aasaasaha iyo agaasimaha guud ee softiweerka suuq geynta suuq geynta, Warshadda Gudbinta yaa la wadaagaya sababta maalgashiga ugu cusboonaysiinta softiweerka suuq geynta waa waxa ugu fiican ee aad u sameyn kartid kobaca ganacsigaaga iyo istiraatiijiyadda suuqgeynta.
Read Martech ZoneQodobka Ku Saabsan Warshadda Gudbinta
Sababta 1: Kahor Ciyaarta Gudbinta
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee aad kuheli karto shirkad ahaan waa inay kahortagtaa tartamayaashaada sida ugu fudud ee lagu gaari karana waa inaad haysato tan ugu horumarsan uguna fudud ee adeegsiga softiweerka suuq geynta si aad ugu shaqeyso ganacsigaaga. Markasta oo sida ugufiican loo isticmaalo softiweerka suuq geynta ee ganacsigaagu adeegsado, ficilada gacanta yar ee kooxda ay u badan tahay inay fuliyaan.
Tani waxay ugu dambeyntii macnaheedu tahay inay heystaan ​​waqti badan oo ay kaga shaqeeyaan howlaha kale ee muhiimka ah sida la shaqeynta macaamiisha iyo sameynta iibinta. Markaad haysato tiknoolajiyada cusub, waxaad sidoo kale marin u heli doontaa habab cusub oo aad uga fiicnaan karto shirkadaha kale - ha ahaato iyada oo loo marayo farsamooyinka suuq-geynta casriga ah, nidaam ka awood badan, ama wax soo saar toosan.
Inaad lug ku hesho tartanka waxay ka dhigan tahay in ganacsigaagu si dabiici ah u soo jiidan doono macaamiil badan isla markaana uu u kobcin doono dakhligaaga. Kaliya ka fikir waqtiga ay shabakadaha bulshada bilaabeen barnaamijyadooda xayeysiinta. Kuwii hore u ahaa inay qaataan (iyagoo adeegsanaya softiweer casri ah si ay ugu bilaabaan kumanaan xayeysiis ah dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah) waxay burburiyeen tartankoodii.
Sababta 2: Waxtarka Gudbinta La Kordhiyay
Haysashada barnaamijka suuq geynta ugu wanaagsan sidoo kale waxay ka dhigan tahay in ganacsigaaga uu noqdo mid waxtar badan. Shaqaalaynta softiweerka suuq geynta cusub ayaa laga yaabaa inay marka hore keento dhiqlaha qaarkood iyo xanuunka sii kordhaya, laakiin markaad boodboodo, ganacsigaagu wuu kobcayaa. Ugu dambayntii, su’aasha ay tahay inaad isweydiiso ganacsade ahaan waa tan;
"Bini'aadamku ma inuu tan sameeyo?"
Badanaa, waxaan shaqaalaysiinaa dadka si ay u qabtaan hawlo caajis ah oo kali kali ah, kaliya maxaa yeelay waxay umuuqataa wadada ugu yar ee iska caabinta. Laakiin tan labaad ee aan bilaabayno baaritaanka xalalka howlahaan suuq geynta tixraaca ah, waxaan ogaanay in inbadan oo kamid ah ay otomatig ahaan ugu shaqeyn karaan wax yar oo lacag la'aan ah. Tani waxay u oggolaaneysaa ilaha aadanaha in ay xoogga saaraan howlaha suuq-geynta gudbinta ee aan otomaatig ahaan loo sameyn karin.
Shaqaale suuqgeyn wax ku ool ah oo xagga suuq geynta ah, oo ka sarreeya wax kasta oo kale, ayaa ka farxad badan iyada oo aan loo xilsaarin shaqo aan caadi ahayn. Adoo iibsanaya barnaamijka suuq geynta ee saxda ah, waxaad dhawaan ogaan doontaa inay si joogto ah u soo bandhigaan cusbooneysiinta suuq geynta gudbinta. Cusboonaysiinta softiweerku badanaa waa la soo bixiyaa si ay adeeg uga dhigto mid hufan, soo bandhigta astaamo cusub, iyo hagaajinta khibradda guud ee isticmaaleyaasha (UX).
Ugu dambeyntiina, cusbooneysiinta softiweerku waxay hoos iyo hoos ugu soo dhici doontaa kala sarreynta meheraddaada, taas oo ka dhigaysa ganacsigaaga mid socodsiinaya oo dhaqso badan Maaddaama nidaamyada suuqgeynta gudbinta ay noqdaan kuwo waxtar leh, awoodda alaabooyinka ama adeegyada ay ku koraan sidoo kale wey ballaaraysaa. Markaad ganacsi ka dhigeyso mid hufan, waxaad u abuureysaa fursado badan shirkaddaada si ay ula kulanto dalabyo badan oo uga yimaada macaamiisha.
Sida ugufiican ee aad ugu adeegi karto macaamiishaada iyo niche; Macaamiisha faraxsan ayaa noqon doonta oo hadba sida wanaagsan ee dadku kaaga sheekaysan doonaan. Ugu dambeyntiina, tayaynta wax-u-qabashada suuq-geynta gudbinta ayaa yareysa farqiga khaladaadka soo-saarka iyo adeegyada, taasoo ka dhigeysa ganacsigaaga inuu kasbado dakhli dheeri ah adoo hagaajinaya fulinta.
Sababta 3: U Soo Bandhig Madal La Taaban Karo ee Kobcinta Suuq Geynta
Maalgelinta barnaamijka suuq geynta gudbinta waa go'aan ganacsi oo adag oo kor u qaadi kara koritaanka. Markaad ganacsi bilowdo - warshado kasta ha noqotee - waxaad caadi ahaan ku bilaabataa wax yar. Rajada ayaa ah inaad kori doonto waqti aan la cayimin, labadaba macaamiisha iyo dakhliga shirkadda lafteeda. Ma jiro dhinac kale oo u fidiya sida tiknoolajiyada.
Markaad go'aansaneysid waxa aad ku maalgelinayso ganacsigaaga, tixgeli waxa ka caawin doona inay si dhakhso leh oo joogto ah u koraan. Markaad maal gashato softiweerka suuq geynta gudbinta, waxaad ku maalgashanaysaa awooda labada software ee suuq geynta gudbinta iyo shirkadaada.
Sababta 4aad: Ku hel Faa'iidooyinka Muddada Dheer ee Ballanqaadka Muddada Gaaban
Markaad maal gashato softiweerka suuq geynta gudbinta, waxaad ku sameysaneysaa maalgashi muddo dheer ah ganacsigaaga. Waxa ugu weyn ee ku saabsan maalgelinta barnaamijka suuq geynta gudbinta ayaa ah in faa'iidooyinka ay sii socon karaan sannado. Maaddaama software-ka saddexaad ee aad maal-gashato uu hagaajiyo waxqabadka iyo wax-ku-oolnimada, waxay kaliya ku korodhaa qiimaha iyo cimri dhererka.
In kasta oo tiknoolajiyaddu aysan daruuri ahayn qaybta ugu xasilloon, haddana waa mid mar walba sii kordheysa. Maalgashiga softiweerka hagaajinaya howlahaaga ganacsiga ayaa dhif ah go'aan qaldan.
Maalgelinta wareejinta wareejinta Suuq-geynta Barnaamijka - Iibsashada a barnaamijka softiweerka suuq geynta ama SaaS macnaheedu waa inaad aasaaska u dhigeyso guusha ganacsigaaga. Lacagta aad isticmaaleyso hadda waxay ku kori doontaa qiimaheeda maadaama ganacsigaagu ka faa'iideysto maalgashiga.
Tusaale ahaan, maalgelin aad sameyso muddo hal sano ah barnaamijka softiweerka suuq geynta ama SaaS waxay soo saari kartaa faa iidooyin aad uga sarreeya marka loo eego maalgashiga shaqaale u shaqeeya kaliya shirkaddaada wax ka yar hal sano. Wareejinta shaqaalaha waxay leedahay kharashyo badan oo laxiriira. Iyadoo la adeegsanayo softiweerka suuq geynta, taasi maahan arrin.
Sababta 5: Haynta Macaamiisha oo La Wanaajiyay
Markaad maal gashato softiweerka suuq geynta gudbinta, waxaad ku ogaan kartaa horumar ballaaran ee xiriirka macaamiisha iyo ganacsiga. Thanks to nidaamyadeeda la dhisay, softiweerka suuq geynta gudbinta waxay u egtahay inay wanaajiso xiriirka macaamiisha asal ahaan.
Hadday ahaan lahayd emayl ama baraha bulshada, maalgashiga ku saabsan softiweerka suuqgeynta waxay ku siinaysaa habab badan oo aad kula xiriiri karto dhagaystayaasha aad damacsan tahay. Taa baddalkeeda, meheraddaadu waxay ku horumari kartaa inay horumariso oo ay kobciso cilaaqaad wanaagsan macaamiisha hadda iyo kuwa mustaqbalka. Barnaamijka gudbinta ee gudbinta wuxuu kaloo bixiyaa fursad lagu wanaajiyo xiriirada ganacsiga.
Haddii aad sameysid xulashooyinka maalgashiga suuqgeynta suuqgeynta suuqgeynta ogeysiiska ah, waxaad sameyn doontaa xiriir xirfadeed shirkadda aad dooratay. Waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad la xiriirto oo aad xiriir la yeelatid ganacsiyada kale ee isticmaala isla tiknoolijiyada la midka ah ama la midka ah.
Ganacsigu wuxuu ku saabsan yahay xiriiro faa'iido wada leh iyo helitaanka siyaabo lagu ballaariyo laguna kala duwo. Haddii aad u adeegsato isku xirnaantaas faa'iidadaada, labada shirkadoodba waxay arki lahaayeen koritaan ballaadhan iyo hal-abuurnimo. Hal go'aan oo maaliyadeed, waxaad albaabadaada ugu furi kartaa xiriiro cusub oo cusub oo miiska ka baxsan.
Sababta 6: Kordhi wax soo saarkaaga
La socota waxtarka, softiweerka suuq geynta saxda ah ayaa kordhin kara waxsoosaarka. Tani waxay si gaar ah run u tahay haddii software-ka gudbinta suuq-geynta ee aad maal-gashato ay fududeyneyso SOP-yadaada hadda jira isla markaana ay ka dhigeyso hababka ganacsiga qaarkood mid otomatik ah. Waxay kuxirantahay nooca softiweerka suuq geynta ee aad dooratay inaad maal gashato, waxaad u badan tahay inaad sare u qaadi doonto wax soo saarka nidaamyadaada iyo shaqaalahaaga.
Shirkad aad u fudud waxay soo saartaa mug sare, oo leh qalad aad u yar. Ganacsigaagu wuxuu kaloo adeegsan karaa softiweerka suuq geynta tixraaca si aad jadwal ugu sameyso una yareyso waqtiga ay ku qaadaneyso inaad ku dhameystirto yoolalka kale. Iyada oo la adeegsanayo barnaamijka suuq geynta ee saxda ah, waxaad si fudud ugu wakiishan kartaa howlaha si aad u hubiso in shaqada loo qabtay si dhakhso leh oo waxtar badan.
Asal ahaan, waxaad dib u iibsaneysaa waqtiga shaqaalahaaga, waxaadna siineysaa waqti dheeri ah si ay waxsoosaar ugu yeeshaan hawlo cusub.
Sababta 7: Helitaanka Nabadgalyo Wanaagsan
Ganacsiyo badan ayaa ka baqaya jabsiga ama hanjabaadaha internetka iyo sabab macquul ah. Tiknoolajiyaddu waxay ka dhigeysaa cabsidaas mid dhab ah. Way adag tahay in maalin la maro iyada oo aan war laga helin khayaano cusub oo waxyeello geysta. Si la yaab leh, barnaamijka ayaa ah midka ugu fiican (kaliya?) Difaaca.
Markaad isticmaaleyso barnaamijka ugu dambeeyay, softiweerka shatiga leh ama alaabada SaaS ee dhinac saddexaad ah si aad u maamusho howlahaaga maalinlaha ah, shirkaddaadu waxay ku shaqeysaa amniga aasaasiga ah. Shirkadaha softiweerka suuq geynta ee aad maalgalinayso kalsoonidaada, waa inaad ku qiimeysaa kalsoonidaas si aad ah. Sumcadoodu waxay ku haysaa inay ilaaliso xogtaada; iyo xogta macaamiishaada oo amaan ah.
Waa hab kale oo maalgashi lagu sameeyo softiweerka suuq geynta tixraaca macno ahaan ayuu u yahay go'aan muddo dheer ah. Waxaad balaarineysaa shirkadaada adoo ilaalinaya hantidaada, fikradahaaga, iyo xogta macmiilkaaga. Xitaa haddii qiimaha alaabada suuq geynta suuqgeynta ay umuuqato mid sare, waa u qalantaa maalgashiga haddii ay ka dhigan tahay ilaalin. Badanaa, maalgashiga barnaamijka suuq geynta ee saxda ah ayaa sameyn kara ama jebin kara ganacsi.
Ganacsi kasta waa inuu qaadaa tallaabooyin ku habboon si loo hubiyo macluumaadka qarsoodiga ah ee ay keydinayaan. Maalgelinta nidaamyada ilaaliya xogta macmiilka xasaasiga ah kaliya maahan hab lagu yareynayo halista ka timaadda jebinta xogta, laakiin sidoo kale waxay u adeegi kartaa barta iibinta markii aad u dhiirrigelineyso meheraddaada macaamiisha.
Sababta 8aad: Suuqgeyn La Kordhiyay
Maxaa siiya ganacsigaaga kobaca ugu badan, iyada oo aan lahayn ama aan lahayn barnaamijka?
Suuq geyn wanaagsan.
Waxa ugu fiican ee tikniyoolajiyadda ayaa ah faa iidada ay bixiso marka laga hadlayo suuqgeynta gudbinta. Laga soo bilaabo dallacsiinta warbaahinta bulshada illaa xayeysiinta, adeegyada softiweerka suuqgeynta adeegyadu waxay awood kuu siineysaa inaad ku faafiso ereyga isla markaana kiciso wacyiga ku saabsan ganacsigaaga si dhakhso leh.
Adeegyo badan oo suuq-geynta gudbinta ah ayaa waxaa isticmaala kumanaan isticmaale si ay u maareeyaan una xakameeyaan istiraatiijiyaddooda suuq-geyn. Markaad maal gashato barnaamijyada suuqgeynta gudbinta ee kuwan oo kale, waxaad toosin kartaa dadaalkaaga suuq geynta gudbinta adoo isla mar ahaantaana kor u qaadaya soo-gaadhistaada.
Sababta 9aad: Fur Albaabo Cusub
Iyadoo tikniyoolajiyad cusub la timid fursado cusub. Wax kasta oo illaa heerkan xusaya fursadda koritaanka iyo horumarka. Taasi waa run.
Teknolojiyaddu waxay fureysaa albaabbo laga yaabo inaadan u maleynin inay suurtogal u tahay ganacsigaaga. Shirkadaha bilowgooda ilaa heerka dhexe ee koritaanka waxay u badan tahay inay ka faa'iideystaan ​​maalgashiga ku saabsan cusbooneysiinta cusub ee suuq geynta suuq geynta iyo hal abuureyaasha iyaga abuura.
Iyadoo aan maalgashi lagu samaynaynin softiweerka suuq geynta, shirkadaadu way istaagi kartaa maadaama nidaamyadu ay duugoobayaan, macaamiisha ayaa ka tagayaan badeecadaada ama adeeggaaga, ama xubnaha kooxda ayaa uga tagaya nidaam darida.
Waa tan xaqiiq; kaliya shirkadaha iyo waxsoosaarka isbeddelaya ayaa ka badbaadi kara heerarka iyo hoos u dhaca dhaqaalaha adduunka. Markaad xulasho horumarineed ku sameyso dhaqaalaha meheraddaada, waxaad ogaan doontaa in ganacsigaagu uusan sii jiri doonin; way barwaaqoobi doontaa. Iyadoo aan la helin maalgalin suuq geyn suuq geyn ah, shirkadaadu way fashilmi doontaa maxaa yeelay ma awoodi doonto inay koraan.
Maalgashigu waa udub dhexaadka ganacsi kasta. Adiga oo ah milkiile ganacsi ama agaasime guud, waxaad go'aansataa halka lacagtaadu ku baxdo. Habka kaliya ee ganacsiyada u koraan waa marka isdhaafsigu yahay mabda 'asaasi ah.
Waa inaad sameysid mabda'a ah fursadda faa'iidada wadaagga u leh aasaaska go'aan gaaristaada; ugu horreyntii marka la maal-galinayo barnaamijka suuq-geynta gudbinta. Markaad dib ugu soo noqotid guddiga sawirada bilowga sanad ganacsi cusub, tixgeli waxa maalgashiyada suuq geynta suuq geynta ee aad u baahan tahay inaad sameyso si aad ganacsigaaga ugu hormariso.
Hadday taasi macnaheedu tahay Software yar oo Adeeg ah (SaaS) Iibso si aad u hagaajiso nidaamkaaga ama aad u maal gasho iskaashi muddo-dheer ah oo lala yeesho shirkadda softiweerka suuq geynta suuq geynta, waa wax aan la inkiri karin ma jiro waqti la mid ah xilligan oo kale oo la weyddiiyo su'aalaha adag. Mar alla markii aad tilmaamto halka ay tahay in maalgashigaagu aado, waxa la joogaa wakhtigii aad ka dhigi lahayd inay taasi dhacdo.
Isku day Warshad Gudbinta Bilaash
Shaacinta: Maqaalkani wuxuu ka kooban yahay xiriiriyeyaal xiriir la leh Warshadda Gudbinta.
Tags: affiliatewarshad gudbingudbinta gudbintaistaraatiijiyada suuq geynta gudbintasababaha gudbintagaadiidka gudbinta
Markii aan jiray da'da 33 sano noloshaydu waxay qaadatay weji lixaad leh. Waxaan la kulmay caqabado aad u xun safarkaygii ganacsi. Waxaan tijaabi bilaash ah ka helay warbaahinta waxaana la i siiyay wax ka yar 10% fursado aan ku sii wadan karo safarkayga ganacsi. Kadib isku dayo badan iyo 114 maalmood oo cadaab ah; Dib ayaan u soo booday. Keliya ma aanan badbaadin shirkaddaydii loo doortay inay tahay shirkadda 332nd ee ugu wanaagsan hal-abuurka ganacsiga gudaha USA sannadka 2015 ee ay samaysay Magazine Magazine, dib ayaan u sii wareejiyay anigoo sii xoog badan.
Sida loo Bilaabo Ganacsi daadinta